Translator Newsletter: Lisitra maro, fikatrohana amin’ny fandikan-teny sy ny maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2019 9:01 GMT
Amin'ny taonina ireo hevi-diso momba ny indostrian'ny fandikan-teny miely any ho any — sehatra efa ho faty io, fifanakalozan-kevitra fotsiny, ary maro lavitra noho izany. Nandray ny raharaha ry zalahy ao amin'ny Business 2 Community ary nanangana lisitra antsoina hoe “Zavatra 11 maha-tsy izy ny Fandikan-teny” mba hanesorana ireo anganongano faheno mahazatra amin'ny fandikanteny. Topazo maso ao hoe dia lazao anay raha misy zavatra azonao ampiana!
Amin'ny maha-mpandika teny, natao hihoatra ireo karazan-tsakatsakana ara-piteny ny asantsika sy mampiely ny vaovao avy amin'ny fiteny iray mankany amin'ny iray hafa. Na dia ny tsara indrindra amin'ny tsara indrindra amintsika aza mety ho tanfintohina ihany amin'ny voambolana tsy mety adika. Samy manana fomba namolavola sy mahatonga azy ho tsy manam-paharoa azy ny kolontsaina tsirairay. Natambatry ny Lifehack anaty lisitra ny sasany amin'ireo teny ary namorona fandravahana mahafinaritra miisa 14 ny mpanakanto Marija Tiurina ampiarahana amin'izany lisitra izany. Mahafantatra ny iray amin'ireto teny ireto ve ianao? Manana ny anao manokana ve ianao? Lazao anay!
Efa nieritreritra ve ianao hoe ahoana no ahafahan'ny fandikan-teny manatsara ny fiainan'ny olona an'arivony? Araka ny voalazan'ity lahatsoratra ity mitondra ny lohateny hoe “Ahoana ny fomba hanatsaran'ny fandikan-teny ny fahaiza-mamaky (teny) ny fahasalamana sy mampihena fandaniana amin'ny fikarakaram-pahasalamana“, dia mahazo tombony lehibe amin'ny fahazoana torohay ara-pahasalamana ny mpifindramonina sy ireo voafetra ihany ny fahaizana teny anglisy raha mamaky izany amin'ny fiteny azony kokoa ry zareo. Vakio ny mianatra ny fomba ahafahan'ny fandikanteny ny torohay ara-pahasalamana amin'ny teny hafa ankoatra ny teny Anglisy manampy olona hanana fiainana tsaratsara kokoa!
Raha teto amin'ity tanànan'i New York taloha tsara ity ianao amin'ny 28 Aprily 2016, tongava aty amiko amin'ity tranonkala lehibe antsoina hoe Translating Activism: Ayotzinapa & Beyond ao amin'ny Fetiben'ny World Voices PEN ity. Ny ampahany tsara indrindra dia maimaimpoana 100% ny manatrika izany!